Xiyyaarri balaa ibiddaa Dabaarqii bishaan deddeebisuun balaa ibiddaa paarkii biyyaalessaa gaarreen kaabaarra qaqqabe dhaamsaa jirti – Fana Broadcasting Corporate
Xiyyaarri balaa ibiddaa Dabaarqii bishaan deddeebisuun balaa ibiddaa paarkii biyyaalessaa gaarreen kaabaarra qaqqabe dhaamsaa jirti
Finfinnee, Eebila 6, 2011(FBC)- Xiyyaarri balaa ibiddaa Dabaarqii bishaan deddeebisuun balaa ibiddaa paarkii biyyaalessaa gaarreen kaabaarra qaqqabe dhaamsaa jirti.
Guyyaa har’aa gara Goondar kan imalte heelikoopterri naannawa Dabaarqii bishaan waraabuu fi yaalii bishaanicha firfirsuu erga gaggeessitee booda gara paarkii biyyaalessaa gaarreen kaabaa imaluun balaa ibiddaa qaqqabe to’achuu eegaltee jirti.
Bishaan naannawa paarkii jiru fayyadamuuf hojjetoota paarkichaa waliin mariin erga taasifamee booda heelikoopterittiin gara iddoo balaan ibiddaa qaqqabeetti akka bobbaate daayreektarri ol aanaa Abbaa Taayitaa Bosonaa fi Bineensotaa naannoo Amaaraa Dooktar Balaayinhee Ayyalee FBCtti dubbataniiru.
Gocha kanarratti hirmaachuuf har’a ganama Keeniyaa irraa gara Ityoophiyaa kan galte heelikoopterri takka bishaan liitirii kuma 1 hanga kuma 2 qabachuu akka dandeessu ibsameera.
Dabalataanis balaa ibiddaa paarkicha mudate to’achuuf gareen deeggarsa taasisan miseensota 12 qabu ogeeyyiin balaa ibiddaa Israa’eel har’a ganama gara iddichaa imalaniiru.
Israa’eel ogeeyyii kana kan ergites gaaffii mootummaan Ityoophiyaa dhiyeesseef irratti hundaa’uun ta’uu ibsameera.